Fahazaran'ireo mpividy mialoha ny fividianana | Martech Zone
Alarobia, Jona 13, 2012 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ny alina hafa dia feno ny kalesako fiantsenana tao amin'ny Apple.com miaraka amin'ny vaovao MacBook Pro miaraka amin'ny fampisehoana retina. Nihodinkodina ara-bakiteny teo ambonin'ny bokotra fividianana ny rantsan-tànako. Ny MacBook Pro misy ahy ankehitriny dia mbola milina tsara nefa tena manomboka mahatsapa miadana raha oharina amin'ireo Mac vaovao rehetra mivoaka. Tamin'izany fotoana izany aho dia nijery fandaharana amin'ny fahitalavitra mamaritra ny MacBook Pro ary teo amin'ny iPad-ko aho. Rehefa manomboka mieritreritra ireo fahazarana mividy an-tserasera aho dia toa izany no mahazatra… Mijery sy miantsena aho rehefa mijery fahitalavitra na miala sasatra amin'ny asa.
Avy amin'ny Milo Infographic: fanadihadiana iray nataon'ny vondrona e-tailing amin'ny anaran'ny Local Corporation dia nahatsikaritra fa ny mpanjifa ankehitriny dia namolavola fitondran-tena mialoha ny fividianana entana - na dia miantsena eo an-toerana aza - entin'ny fampiasana teknolojia sy fitaovana finday. Izahay dia mijery ny fahazarana mialoha ny fiantsenana ataon'ireo mpanjifa eo an-toerana sy finday ireo.
Fanamarihana: Tsy nividy MacBook Pro aho. Na dia azoko atao aza ny manamarina izany amin'ny asa, tsy afaka mandany vola amin'ny fitaovana intsony isika amin'izao fotoana izao. Natsipiko haingana teo amin'ny iPad-ny ilay sariny ary niverina nanonofy momba azy aho. (Nanampy ihany koa izany fa tsy ho ato mandritra ny herinandro vitsivitsy raha nividy azy aho).
Tags: fahazarana mividyfahazarana ecommercefitafianaSary torohayiPadFivarotana finday sy tablettemialoha levitratakelaka
Jun 27, 2012 ao amin'ny 2: 31 PM
Ity dia infographic mahafinaritra satria tsy dia mahasosotra ny mijery azy. Ny sasany amin'izy ireo dia manana "info" be loatra momba azy ireo. Farafaharatsiny, manoritra ny zavatra lazaiko amin'ny olona foana izy io: Tena marani-tsaina tokoa ny mpanjifanao, mikaroka tsy tapaka amin'ny fitaovana finday izy ireo mba hahitana anao, hahita safidy tsara kokoa, mamaky hevitra ary mitady vidiny.
PS Manantena hahazo an'io macbook vaovao io tsy ho ela ianao!